Tsalela Us: + 86-28-86050301
Tsalela Us: + 86-13880676215
I-SARS-CoV-2 eyahlukileyo yeNyukliya yokuKhangela iAcid Kit- B.1.1.7 umgca (UK), B.1.351 umgca (ZA) kunye no-P.1 umgca (BR)
I-SARS-CoV-2 eyahlukileyo yeNyukliya yokuFumanisa i-Acid Kit II- B.1.1.7 umgca (UK), B.1.351 umgca (ZA), B.1.617 umgca (IND) kunye no-P.1 umgca (BR).
I-SARS-CoV-2 eyahlukileyo yeNyukliya yokufumanisa i-Acid Kit Kit-B.1.617 imigca (IND)
I-SARS-CoV-2 Kit yeNyukliya yokuFumanisa iAcid
Uvavanyo lwe-SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) -nasopharyngeal (NP) swab, nasal (NS) swab, kunye nemifuziselo yamathe
I-SARS-CoV-2 IgM / IgG yovavanyo lweKhithi (yeColloidal Gold)
Intsholongwane yeTyhubhu yokuPhakathi
I-SARS-CoV-2 / i-Flu / i-RSV yeNyukliya yokuFumanisa i-Acid Kit (I-Multiplex PCR yeFluorescent Probe Method)
Ukucocwa kweRNA kunye neDNA
Intsholongwane ye-RNA yokuzahlula
Intsholongwane yeDNA kunye neRNA Kit yokuKhetha
Iseli iyonke RNA yokuzahlula isixhobo
Izilwanyana zizonke i-RNA Isolate Kit
Tyala iyonke i-RNA Isolate Kit
Tyala iyonke iRNA Isolate Kit Plus
Ikhithi encinci yePlasmid Mini
Izilwanyana ze-DNA zokwahlula ikiti
Kit yegazi yeDNA Mini
Utyalo lweDNA yokuQhawula
I-RT Heroᵀᴹ I (Master Premix ye-strand yokuqala ye-cDNA synthesis)
I-RT Heroᵀᴹ II (i-Master Premix ye-strand yokuqala ye-cDNA synthesis ye-Real Time PCR)
I-RT Heroᵀᴹ II (i-Master Premix ye-strand yokuqala ye-cDNA synthesis ye-Real Time PCR ene-gDNase)
PCR Heroᵀᴹ (NgeDayi)
Ixesha lokwenene PCR Easy SYBR Green I
Ixesha lokwenene PCR Easy Taqman
I-RT Easyᵀᴹ II (ene-gDNase) i-Master Premix ye-strand yokuqala ye-cDNA synthesis ye-Real Time PCR ene-gDNase
I-Lnc-RT Heroᵀᴹ I (ene-gDNase) (Isimaphambili esikhulu se-strand cDNA synthesis evela kwi-IncRNA)
Iseli ekhawulezileyo ye-RT ngqo-qPCR Kit -I-SYBR eluhlaza mna nge-RT ethe ngqo-qPCR usebenzisa iiseli ezili-10-,000,000
Izilwanyana zezilwanyana ngqo kwi-PCR Kit
Izicubu zezilwanyana ngqo PCR Kit-UNG
Imouse yomsila Super PC ngqo Kit
Imouse yomsila ngqo kwi-PCR Kit
Imouse Umsila ngqo PCR Kit-UNG
I-Zebra yeNtlanzi ngqo kwi-PCR Kit
I-Zebra yeNtlanzi ngqo kwi-PCR Kit-UNG
Tyala igqabi ngqo kwi-PCR Kit
Tyala igqabi ngqo kwi-PCR Kit-UNG
Tyala igqabi ngqo kwiPCR Plus Kit
Tyala igqabi ngqo kwiPCR kunye neKIT-UNG
Tyala iMbewu ngqo yePCR Kit I
Iselfowuni ngqo ye-RT-qPCR Kit
Ikhithi ye-ForeSNP yeGenotyping
Amandla eR & D
Iindlela ezine zokuthintela ungcoliseko lweemveliso zePCR
ngomphathi ku 2021-07-30
Ukwakha iSOP Systerm Ukuseka uvavanyo lwe-PCR lwe-SOP ukumisela umgangatho wokuziphatha kwabasebenzi bokulinga. Abavavanyi bahlala ngokungqongqo kwiinkqubo zokusebenza, kunye nokunciphisa ungcoliseko lwePCR olunokubangelwa zizinto zabantu okanye ukuthintela ukwenzeka kongcoliseko ekusebenzeni. Ukongeza ...
Ungakuphucula njani ukusebenza kweLncRNA yokubuyisela umva?
ngomphathi ku 2021-07-23
Ikhokele i-RNA ende engafakwanga iikhowudi, i-lncRNA yi-RNA engafakwanga iikhowudi enobude obungaphezulu kwe-200 ye-nucleotides, ngokubanzi phakathi kwe-200-100000 nt. I-lncRNA ilawula ukuvakaliswa kofuzo kwi-epigenetic, ukukhuphela kunye nasemva kokubhalwa kwendlela yokubhala, kwaye ithatha inxaxheba kwi-X chromosome cwaka, ukushicilelwa kwe-genome kunye ne-chroma ...
Inokudlula isuke komnye umntu iye komnye umntu ngemizuzwana eyi-14. Kwenzeka ntoni kuxinzelelo lwe-Delta "olosulela kakhulu" kwiZhong Nanshan Pass?
Umthombo weTranaslated: Umhleli weqela le-WuXi AppTec eGuangzhou, China, amapolisa anoxanduva lokuncedisa kuphando lwezifo akhuphe ividiyo yokujonga: Kwivenkile yokutyela enye, bobabini bangena kwigumbi lokuhlambela emva komnye ngaphandle kokudibana. Imizuzwana eli-14 kuphela ye-co-e ...
I-SNP ilebula yemolekyuli kunye nokufumanisa
Emva kokuba umphengululi waseMelika u-Eric S. Lander acebise ngokusesikweni i-nucleotide polymorphism (SNP) njenge-marker yesizukulwane sesithathu kwi-1996, i-SNP isetyenziswe ngokubanzi kuhlalutyo lomanyano lweempawu, ukwakhiwa kwemephu yemfuza yemfuza, kunye nokuhlolwa kwemfuza yabantu. , D ...
Inzululwazi edumileyo | Uyifumana njani i-coronavirus entsha nge-qPCR
ngomphathi ku 2021-07-19
I-COVID-19 sisifo esosulelayo esibangelwa luPhuculo lweSifo esiKhawulezileyo sokuphefumla iCoronavirus Type 2. Xa umntu wosulelekile, ezona mpawu zixhaphakileyo ziquka umkhuhlane, ukukhohlela, kunye nokuphefumla kancinci. Iisampulu ezisetyenziselwa ukuvavanywa zinokuqokelelwa nge-nasopharyngeal swabs okanye i-oropharyngeal swabs. Mna ndithini...
Ngaba usasebenzisa ubuchwepheshe obuqulunqwe kwiminyaka engama-30 eyadlulayo ukukhupha i-RNA?
ngomphathi ku 2021-07-16
Ngaba usasebenzisa i-Trizol ukukhupha i-RNA? Mhlekazi, sukundikhathaza ngempilo yakho! I-Trizol sele ifuna ukujongwa, sukundixelela ukuba usemnyameni? Elona candelo liphambili leTrizol reagent yi-phenol, kwaye izinto eziphilayo ezinje nge-chloroform nazo ziyongezwa kulingo ...
Malunga neendlela zokukhupha iRNA ezidlulileyo nezangoku ongazaziyo
ngomphathi ku 2021-07-09
Intshayelelo: I-RNA, igama lenzululwazi i-ribonucleic acid, isifinyezo sayo sivela kwi-RiboNucleic Acid, luhlobo lwe-asidi ye-nucleic eyakhiwe ngokudibanisa ubuncinci beerokliyaotides ngokusebenzisa iibhondi ze-phosphodiester. Isiseko sokuphononongwa kwe-RNA kukukhupha i-RNA iyonke ngaphandle kongcoliseko, kunye nesiseko ...
Uhlalutyo olupheleleyo lobuchwephesha bokuqonda isifo (1)
ngomphathi ku 2021-07-08
Itekhnoloji yokuchonga imolekyuli isebenzisa iindlela zebhayoloji yokujonga ukubonakala kunye nolwakhiwo lwezixhobo zomzimba womntu kunye neentsholongwane ezahlukeneyo, ukuze kufezekiswe injongo yokuqikelela kunye nokuchonga izifo. Kwiminyaka yakutshanje, ngokuphuculwa kunye nokuphindaphindwa kwemolekyuli ...
Uyikhupha njani i-RNA ekumgangatho ophezulu?
Nokuba uyi-newbie kwi-biological, okanye umphathi omkhulu onesakhono esomeleleyo kunye namandla, ukhe wazikhathaza ngokufumana i-RNA yeseli ekumgangatho ophezulu? Bangaphi abantu abachitha iisampulu ezixabisekileyo ngenxa yokusebenza okunzima kunye nobunzima bendlela yesiqhelo yeTrizol? Ngoku, iindaba ezilungileyo ...
Kufanelekile ukuba ufunde 丨 ama-44 amanqaku okubeka iliso kumngcipheko kwilabhoratri ye-PCR
ngomphathi ku 2021-07-03
Zimbini iintlobo eziphambili zomngcipheko kwiilebhu ze-PCR: umngcipheko wokukhuseleka kunye neengozi ze-nucleic acid yokungcola. Eyokuqala yenzakalisa abantu nokusingqongileyo, kwaye eyokugqibela ichaphazela iziphumo zovavanyo lwe-PCR. Eli nqaku limalunga ne-PCR yeendawo zokujonga umngcipheko kunye ne-...
Inani elipheleleyo lezicatshulwa ze-SCI zeemveliso ze-Foregene yi-231, ifuthe lilonke lempembelelo yi-786.202
Ukusukela oko yasekwa ngo-2011, i-Foregene yayijolise kuphuhliso lobuchwephesha obunxulumene nemolekyuli kunye neeseli zebhayoloji, iimveliso kunye neenkonzo. Ukuthetha nge-Foregene, ucinga ntoni ngayo: I-RNA yokucoca ikiti ngemizuzu eyi-11? Ikhowudi ye-PCR ngqo ngaphandle kokuhlanjululwa kwe-acid ye-acid? ...
Emva kokugonywa ngogonyo lwe-COVID-19, ndazi njani ukuba ii-antibodies zenziwe?
ngomphathi ku 2021-07-01
Kude kube nge-25 kaJuni, ngo-2021, iKhomishini yezeMpilo yeSizwe yase-China ikhuphe idatha ebonisa ukuba ngaphezulu kwe-630 yezigidi zabantu abagonyiwe elizweni lam, oko kuthetha ukuba inqanaba lokugonywa kwabantu bonke e-China lidlule kwi-40%, inyathelo elibalulekileyo ekumiseni umhlambi ...
Imbuyekezo Foregene Co., Ltd.
Idilesi: D2, ibhlokhi A, iziko elitsha lezonyango elitsha,
Inombolo ye-18, iNdlela yoMntla Bayi, isitalato iYongning,
Ifowuni: + 86-28-86050301
Ihlokondiba / uWhatsapp / Wechat: + 86-13880676215